ကဗျာဆရာမောင်ဆောင်းခအမှုရုပ်ဖို့ HRW တောင်းဆို
လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ကဗျာဆရာ မောင်ဆောင်းခကို ရန်ကုန်မြို့ အင်းစိန်တရားရုံးမှာ တွေ့ရ။ (မေ ၂၃၊ ၂၀၁၉)
လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ကဗျာဆရာ မောင်ဆောင်းခ အပေါ် တရားစွဲဆို ထားတာကို ရုပ်သိမ်းပေးသင့်တယ်လို့ လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေး HRW အပါအဝင် အဖွဲ့ ၇ ဖွဲ့က မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကို တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ ရက်စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်မှာ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ ချင်းပြည်နယ်တွေမှာ အင်တာနက် ပိတ်ထားတာတွေကို ရပ်ဆိုင်းပေးဖို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ မောင်ဆောင်းခကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့က တရားစွဲဆိုထားတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ရခိုင်နဲ့ ချင်းပြည်နယ်တွေမှာ အင်တာနက် ပိတ်ပင်ထားတာ တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့ ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့က ဆူးလေ ဂုံးကျော် တံတား ပေါ်မှာ အင်တာနက် ဖြတ်တောက်မှု အလိုမရှိ စာတမ်းနဲ့ လူသတ်မှုနဲ့ စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကို ဖုန်းကွယ်ဖို့ အင်တာနက် ပိတ်ထားတာ လားဆိုတဲ့ စာတမ်းပါ ပိတ်စတွေချိတ်ဆွဲ ဆန္ဒပြခဲ့လို့ သူ့ကို ငြိမ်းစုစီ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၉ နဲ့ တရားစွဲ ဆိုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့မှာ အမိန့်ချမှတ်မယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
အင်တာနက်ဖွင့်ပေးရေး လှုပ်ရှားသူ ငြိမ်းစုစီနဲ့ အမှုဖွင့်ခံရ
ဒါကြောင့် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ ဖြစ်တဲ့ Access Now ၊ Amnesty International၊ Article 19၊ Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)၊ Civil Rights Defenders၊ Fortify Rights နဲ့ Human Rights Watch. တို့က ပူးတွဲ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီး သူ့ရဲ့ အမှုကို ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ မြန်မာ အာဏာပိုင်တွေကို တောင်းဆိုလိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မောင်ဆောင်းခရဲ့ အမှုဟာ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုမှုနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြမှုကို သည်းမခံတဲ့ မြန်မာ အစိုးရရဲ့ ပြုမူချက်တွေထဲက နောက်ဆုံး ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ FORUM-ASIA က အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ Shamini Darshni Kaliemuthu က ပြောပါတယ်။
အလားတူပဲ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် မြတ်ဟိန်းထွန်းနဲ့ ကျော်လင်းတို့ကိုလည်း ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့က ကမာရွက်မြို့နယ် အတွင်း ဆန္ဒပြခဲ့ရာမှာ အာဏာပိုင်တွေကို ကြိုတင် အသိပေး အကြောင်းမကြားလို့ဆိုပြီး တရားရုံးက ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်နေ့က ထောင်ဒဏ် တစ်လစီ ကျခံစေဖို့ အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း၊ ဆန္ဒပြချိန်မှာ ကျောင်းသားတွေက ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင် မောင်တော မြို့က မူလတန်းကျောင်းပေါ် ဗုံးဆံ ကျရောက်လို့ ကျောင်းသား ၂၁ ယောက် ဒဏ်ရာရတဲ့ ကိစ္စအတွက် ဆန္ဒပြနေခဲ့ကြတာဖြစ်ကြောင်းလည်း လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေက ပြောပါတယ်။
မတ်လတုန်းကတော့ တရားရုံးတစ်ခုက ကျောင်းသား ၇ ယောက်ကို အလားတူ ပြစ်မှုအတွက် အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ် တလ စီ ချမှတ်ထားတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
ကြိုတင်အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ဖို့ ပျက်ကွက်တာကို ရာဇဝတ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ငြိမ်းစုစီ ဥပဒေဟာ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့် အရေး ဥပဒေတွေနဲ့ မကိုက်ညီသလို အခုလို ကိုဗစ်-၁၉ ကာလမှာ ထောင်ချတဲ့ ပြစ်ဒဏ်က သိပ်ကြီးလေးလွန်းလှကြောင်း၊ ဒါကြောင့် ကဗျာဆရာ မောင်ဆောင်းခ အပေါ် စွဲဆိုထားတဲ့ အမှုကို ရုပ်သိမ်းပြီး ကျောင်းသား ၉ ယောက်အပေါ် ချမှတ်ထားတဲ့ အမိန့်တွေကိုလည်း ပယ်ဖျက်သင့်ကြောင်း လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့တွေက တောင်းဆိုထားပါတယ်။
ကဗြာဆရာမောငျဆောငျးခအမှုရုပျဖို့ HRW တောငျးဆို
လှတျလပျစှာ ပွောဆိုခှငျ့ တကျကွှလှုပျရှားသူ ကဗြာဆရာ မောငျဆောငျးခ အပျေါ တရားစှဲဆို ထားတာကို ရုပျသိမျးပေးသငျ့တယျလို့ လူ့အခှငျ့အရေး စောငျ့ကွညျ့ရေး HRW အပါအဝငျ အဖှဲ့ ၇ ဖှဲ့က မွနျမာအာဏာပိုငျတှကေို တောငျးဆိုလိုကျပါတယျ။ စကျတငျဘာလ ၂ ရကျနေ့ ရကျစှဲနဲ့ ထုတျပွနျတဲ့ ကွညောခကျြမှာ ပဋိပက်ခ ဖွဈပှားနတေဲ့ ရခိုငျပွညျနယျနဲ့ ခငျြးပွညျနယျတှမှော အငျတာနကျ ပိတျထားတာတှကေို ရပျဆိုငျးပေးဖို့ ငွိမျးခမျြးစှာ ဆန်ဒပွ တောငျးဆိုခဲ့တဲ့ မောငျဆောငျးခကို ရဲတပျဖှဲ့က ဇူလိုငျလ ၇ ရကျနကေ့ တရားစှဲဆိုထားတယျလို့ ဖျောပွထားပါတယျ။
ရခိုငျနဲ့ ခငျြးပွညျနယျတှမှော အငျတာနကျ ပိတျပငျထားတာ တဈနှဈပွညျ့မွောကျတဲ့ ဇှနျလ ၂၁ ရကျနကေ့ ဆူးလေ ဂုံးကြျော တံတား ပျေါမှာ အငျတာနကျ ဖွတျတောကျမှု အလိုမရှိ စာတမျးနဲ့ လူသတျမှုနဲ့ စဈရာဇဝတျမှုတှကေို ဖုနျးကှယျဖို့ အငျတာနကျ ပိတျထားတာ လားဆိုတဲ့ စာတမျးပါ ပိတျစတှခြေိတျဆှဲ ဆန်ဒပွခဲ့လို့ သူ့ကို ငွိမျးစုစီ ဥပဒပေုဒျမ ၁၉ နဲ့ တရားစှဲ ဆိုထားတာ ဖွဈပါတယျ။ သူ့ကို စကျတငျဘာလ ၄ ရကျနမှေ့ာ အမိနျ့ခမြှတျမယျလို့ ခနျ့မှနျးရပါတယျ။
၆၆ (ဃ) အာမခံရရေး ဥပဒေပြင်မည်
ဒါကွောငျ့ နိုငျငံတကာ လူ့အခှငျ့အရေးအဖှဲ့အစညျးတှေ ဖွဈတဲ့ Access Now ၊ Amnesty International၊ Article 19၊ Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)၊ Civil Rights Defenders၊ Fortify Rights နဲ့ Human Rights Watch. တို့က ပူးတှဲ ကွညောခကျြထုတျပွနျပွီး သူ့ရဲ့ အမှုကို ရုပျသိမျးပေးဖို့ မွနျမာ အာဏာပိုငျတှကေို တောငျးဆိုလိုကျတာလညျး ဖွဈပါတယျ။
မောငျဆောငျးခရဲ့ အမှုဟာ လှတျလပျစှာ ပွောဆိုမှုနဲ့ ငွိမျးခမျြးစှာ ဆန်ဒပွမှုကို သညျးမခံတဲ့ မွနျမာ အစိုးရရဲ့ ပွုမူခကျြတှထေဲက နောကျဆုံး ဖွဈရပျတဈခုဖွဈတယျလို့ FORUM-ASIA က အမှုဆောငျ ဒါရိုကျတာ Shamini Darshni Kaliemuthu က ပွောပါတယျ။
အလားတူပဲ ကြောငျးသား ခေါငျးဆောငျ မွတျဟိနျးထှနျးနဲ့ ကြျောလငျးတို့ကိုလညျး ဖဖေျောဝါရီလ ၂၃ ရကျနကေ့ ကမာရှကျမွို့နယျ အတှငျး ဆန်ဒပွခဲ့ရာမှာ အာဏာပိုငျတှကေို ကွိုတငျ အသိပေး အကွောငျးမကွားလို့ဆိုပွီး တရားရုံးက ဇူလိုငျလ ၂၇ ရကျနကေ့ ထောငျဒဏျ တဈလစီ ကခြံစဖေို့ အမိနျ့ခမြှတျခဲ့ကွောငျး၊ ဆန်ဒပွခြိနျမှာ ကြောငျးသားတှကေ ရခိုငျပွညျနယျ ဘူးသီးတောငျ မောငျတော မွို့က မူလတနျးကြောငျးပျေါ ဗုံးဆံ ကရြောကျလို့ ကြောငျးသား ၂၁ ယောကျ ဒဏျရာရတဲ့ ကိစ်စအတှကျ ဆန်ဒပွနခေဲ့ကွတာဖွဈကွောငျးလညျး လူ့အခှငျ့အရေးအဖှဲ့တှကေ ပွောပါတယျ။
မတျလတုနျးကတော့ တရားရုံးတဈခုက ကြောငျးသား ၇ ယောကျကို အလားတူ ပွဈမှုအတှကျ အလုပျကွမျးနဲ့ ထောငျဒဏျ တလ စီ ခမြှတျထားတယျလို့လညျး ပွောပါတယျ။
ကွိုတငျအကွောငျးကွားစာ ပေးပို့ဖို့ ပကျြကှကျတာကို ရာဇဝတျမှုအဖွဈ သတျမှတျထားတဲ့ ငွိမျးစုစီ ဥပဒဟော နိုငျငံတကာ လူ့အခှငျ့ အရေး ဥပဒတှေနေဲ့ မကိုကျညီသလို အခုလို ကိုဗဈ-၁၉ ကာလမှာ ထောငျခတြဲ့ ပွဈဒဏျက သိပျကွီးလေးလှနျးလှကွောငျး၊ ဒါကွောငျ့ ကဗြာဆရာ မောငျဆောငျးခ အပျေါ စှဲဆိုထားတဲ့ အမှုကို ရုပျသိမျးပွီး ကြောငျးသား ၉ ယောကျအပျေါ ခမြှတျထားတဲ့ အမိနျ့တှကေိုလညျး ပယျဖကျြသငျ့ကွောငျး လူ့အခှငျ့အရေး အဖှဲ့တှကေ တောငျးဆိုထားပါတယျ။
ကဗျာဆရာခက်သီရဲ့ဇနီး မချောစုနဲ့ ဗွီအိုအေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်
မှတ်ပုံတင်အခက်အခဲကြောင့် ဟိန္ဒူနဲ့ မွတ်စလင်တချို့ မဲပေးခွင့် မရေရာ
ရခိုင်မှာ အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေး အပြည့်အဝဖွင့်ပေးဖို့ တောင်းဆို
နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲမှာ မွတ်ဆလင်ပါတီကိုယ်စားလှယ်တချို့ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်မရတဲ့အပေါ် HRW ဝေဖန်
ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ခွင့်ပိတ်ခံထားရတဲ့ PACE အဖွဲ့ကို စောင့်ကြည့်ခွင့်ပြန်ပေး